Shandad la iska dhaafay ayaa dhalisay daadgureyn garoonka diyaaradaha Frankfurt
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Shandad la iska dhaafay ayaa dhalisay daadgureyn garoonka diyaaradaha Frankfurt
Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Qeybo ka mid ah garoonka diyaaradaha Frankfurt ayaa looga daadgureeyay sababo la xiriira bambo ama qori hanjabaad
Dhawr meelood oo ka mid ah Madaarka Frankfurt ayaa la xidhay fiidnimadii Sabtida, iyada oo bilayska madaarku bilaabeen “hawlgal”, oo sida muuqata kiciyay shandad aan lala socon, taasoo horseeday mala-awaal bam ama hub hanjabaad ah.
Madaarka FrankfurtTerminal 1-keeda, oo ay la socoto xaruntiisa tareenka ee ku lifaaqan ayaa laga daad gureeyay oo laga xiray dadweynaha iyadoo booliisku ay baarayeen aagga.
Booliska gobolka iyo federaalka ayaa ku lug lahaa howlgalka, booliska garoonka ayaa ku qoray Twitter-ka in hal shandad ah oo laga tagay la baaray lana ogaaday inay badqabe tahay.
Wax badan lagama oga howlgalka, dadkuna markay ka dhoofayeen garoonka diyaaradaha, wararka ku saabsan bambo ama hanjabaad qoryo ayaa ku wareegayay baraha bulshada.
Mid ka mid ah fiidiyowga oo si dhakhso ah ugu baahay khadka tooska ah ayaa u muuqda mid muujinaya sarkaal bilays ah oo qori ku tilmaamaya qof dhulka ku jiifa gudaha garoonka. Maamulka garoonka ayaa ka digay mala-awaalka, si kastaba ha noqotee, waxayna dadweynaha ka codsadeen inaysan la wadaagin fiidiyowyada dhacdada.
Booliska ayaa uga digay rakaabka inay raacaan tilmaamaha amniga garoonka, halka maamulka garoonka ay uga digeen safrayaasha dib u dhacyo.
Bilayska garoonka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka 7-dii fiidnimo ee saacadda GMT ku sheegay in howlgalka uu ku xirmay isla markaana xannibay aagagga si tartiib tartiib ah dib loogu furay.
Madaarka Frankfurt waa kan afraad ee ugu mashquulka badan Yurub marka loo eego tirada rakaabka, iyo kan ugu mashquulka badan xamuulka. Duqeyn ka dhacday garoonka diyaaradaha sanadkii 1985 ayaa waxaa ku dhintay saddex qof, in ka badan 70 kalena waa ay ku dhaawacmeen, iyadoo baarayaasha ay eedda dusha ka saareen argagixisada Falastiin.